Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Anxiety Disorders စိုးရိမ်စိတ်ကဲလွန်ခြင်း
Tue, Apr 29, 2014 at 2:11 PM
Dear doctor, I beg you to read my letter (file attached) patiently. I hope that you will reply to me. I will be waiting for reply. ဒီ အီးမေးလ်နဲ့အတူ အသက် ၄၉ နှစ်ရှိ၊ အမျိုးသမီးတဦးဆီကနေ စာမျက်နှာ ၂ ရွက်အပြည့် လက်ရေးနဲ့ စာတစောင် ရပါတယ်။ သူ့ဆီကိုပြန်ဘို့ ဒီဆေးပညာစာလေး ရေးတာပါ။
1. panic disorder ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ခြင်း၊
2. obsessive compulsive disorder စွဲလမ်းမှု အားကြီးခြင်း၊
3. post-traumatic stress disorder ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး စိတ်ဖိအားများခြင်း၊
4. social anxiety disorder အသိုင်းအဝိုင်းထဲ ဝင်မဆန့်ခြင်း၊
5. specific phobias တခုခုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြောက်နေခြင်း နဲ့
6. generalized anxiety disorder ယေဘုယျကြောက်စိတ်အားကြီးခြင်း။
Anxiety စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာ လူ့သဘာဝဖြစ်တယ်။ အချိန်မရွေး၊ လူမရွေးမှာ လာဖြစ်နေတယ်။ Anxiety disorders စိုးရိမ်စိတ်ကဲလွန်ခြင်းကတော့ ရောဂါဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဘဝကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဘို့မှာ အခက်အခဲအတားအဆီးတခု ဖြစ်နေတော့တယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေထဲမှာ ဒီရောဂါက ဆိုးတဲ့အထဲမှာ ပါတယ်။
1. Panic disorder ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ခြင်း၊ ရုတ်တရက် ကြိုတင်မှုမရှိဘဲ ကြောက်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ ထပ်ထပ်ဖြစ်မယ်။ ဇောချွေးတွေပြန်မယ်။ ရင်ပတ်နာမယ်။ ရင်တုန်မယ်။ ဆို့နေသလိုခံစားရမယ်။ နှလုံးရောဂါ အတက်ရသလိုမျိုး ဆင်ဆင်တူနေမယ်။ (နှလုံးရောဂါ မဟုတ်ပါ။)
2. Obsessive-compulsive disorder (OCD) စွဲလမ်းမှု အားကြီးခြင်း၊ ကြောက်စိတ်ကိုသာ အမြဲတွေးထင်နေမယ်။ ဒီအတွက် တခုခုအားကိုးရာရှာတာမျိုး လုပ်နေမယ်။ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ လက်ခဏခဏဆေးနေသူမျိုးလဲ အတူဘဲ။
3. Post-traumatic stress disorder (PTSD) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး စိတ်ဖိအားများခြင်း၊ ထိန့်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာ တကယ်တန်းတခုခုကို ကြုံတွေ့ခံစားပြီးနောက် ကြောက်နေမယ်။ ရုပ်ပိုင်းစော်ကားမှု၊ လိင်ပိုင်းစော်ကားမှု ခံရသူမျိုး။ ဆွေမျိုးထဲက သေဆုံးမှု။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်း။
4. Social anxiety disorder အသိုင်းအဝိုင်းထဲ ဝင်မဆန့်ခြင်း၊ social phobia လဲခေါ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်သတိထားလွန်းနေသူ။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲဝင်ရမှာ စိုးကြောက်နေသူ။
5. Specific phobias တခုခုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ် ကြောက်နေခြင်း၊ မြွေ၊ အမြင့်၊ ပျံသန်းမှု စတာတွေကို သိပ်ကြောက်နေသူ။ တကယ့်အခြေအနေနဲ့ ကြောက်စိတ်က အချိုးမမျှဘူး။
6. Generalized anxiety disorder ယေဘုယျကြောက်စိတ်အားကြီးခြင်း။ ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်မှုကင်ပြီး ကြောက်အားကြီးနေသူ။
Symptoms of an Anxiety Disorder ဘယ်လိုခံစားနေရသလဲ
• Feelings of panic, fear, and uneasiness ဆောက်တည်ရမရ၊ ကြောက်နေ၊ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေ။
• Uncontrollable, obsessive thoughts ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ၊ အထင်အမြင်ကိုသာ တန်းတန်းစွဲဖြစ်နေ။
• Repeated thoughts or flashbacks of traumatic experiences ခံစားခဲ့ရဘူးတာကိုဘဲ ထပ်ထပ်တွေးထင်နေ၊
• Nightmares အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်နေ။
• Ritualistic behaviors, such as repeated hand washing တခုခုကိုထပ်ထပ်လုပ်နေ၊ လက်ကိုခဏခဏဆေးနေ။
• Problems sleeping အိပ်မရ။
• Cold or sweaty hands and/or feet ခြေ-လက် အေးစက်နေ။
• Shortness of breath အသက်ရှူတိုတောင်း၊
• Palpitations ရင်တုန်၊
• An inability to be still and calm တည်ငြိမ်အောင်နေလို့မရ၊
• Dry mouth အာခေါင်ခြောက်၊
• Numbness or tingling in the hands or feet ခြေ-လက်ထုံကျင်နေ၊
• Nausea ပျို့၊
• Muscle tension ကြွက်သားတွေ တင်းတောင့်နေ၊
• Dizziness ခေါင်းမူး။ Causes Anxiety Disorders ဘာလို့ဖြစ်သလဲ တိတိကျကျမသိပါ။ တခြားစိတ်အခြေအနေတွေလိုဘဲ personal weakness အားနည်းလို့ဖြစ်ရတာတော့ မဟုတ်ပါ။ character flaw စာရိတ္တချို့ယွင်းလို့လဲ မဟုတ်ပါ။ poor upbringing မိဘအုပ်ထိန်းမှု နည်းလို့လဲ မဟုတ်ပါ။ သုတေသနတွေအရ အကြောင်းတရားတွေ ပေါင်းဆုံရာကနေဖြစ်တယ်။
• စိတ်မှာဖြစ်တာပေမဲ့ brain circuits ဦးနှောက်စီးကြောင်းချို့ယွင်းလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။
• long-lasting stress နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကနေ ဦးနှောက်စီးကြောင်းကို သက်ရောက်နိုင်တယ်။
• brain structures ဦးနှောက်တည်ဆောက်မှုပြောင်းလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။
• families မိသားစုထဲတယောက်မကဖြစ်တတာလဲရှိတယ်။
• trauma or significant event စိတ်ထိခိုက်စရာကြီးကြီးမားမာခံစားရတာကနေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
1. Psychotherapy စိတ်ကုသနည်း။
2. Cognitive-behavioral therapy စိတ်ကုသနည်းတမျိုး။
3. Dietary and lifestyle changes လူနေမှုပုံစံပြောင်းပေးနည်း။
4. Relaxation therapy စိတ်ပြေလက်ပျောက်လုပ်ပေးနည်။
5. Medication ဆေးပေးနည်း။ anti-depressants နဲ့ anxiety-reducing drugs ဆေးတွေပေးမယ်။
• monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) = desvenlafaxine (Pristiq), fluoxetine (Prozac), imipramine (Tofranil), isocarboxazid (Marplan), meperidine, methadone, phenelzine (Nardil), propoxyphene (Darvon), selegiline transdermal system (EMSAM), sertraline (Zoloft), St. John's Wort, tramadol (Ultram), tranylcypromine (Parnate), venlafaxine (Effexor),
• tricyclic antidepressants (TCAs) = amitriptyline (Elavil, Endep), amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan, Adapin), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor, Aventyl), protriptyline (Vivactil), trimipramine (Surmontil)
• selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) = citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil, Paxil CR, Pexeva), sertraline (Zoloft)
• serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) = duloxetine (Cymbalta), venlafaxine (Effexor), desvenlafaxine (Pristiq)
အမေရိကန်လူမျိုးအရွယ်ရောက်သူတွေ စုစုပေါင်း ၁၉ သန်းမှာဒီရောဂါရှိတယ်။ တချို့ဆိုရင် ကလေးဘဝကတည်းကနေ ခံစားနေရတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ အကြောက်ဘေးက ကင်းဝေးကြပါစေ။